Goormee ayaa dib loo ciyaari karaa kulankii baaqday ee Manchester United iyo Liverpool?… (Miyaa dhibcaha la siin karaa Reds?) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Goormee ayaa dib loo ciyaari karaa kulankii baaqday ee Manchester United iyo Liverpool?… (Miyaa dhibcaha la siin karaa Reds?)
May 3, 2021 at 09:58 Goormee ayaa dib loo ciyaari karaa kulankii baaqday ee Manchester United iyo Liverpool?… (Miyaa dhibcaha la siin karaa Reds?)2021-05-03T09:58:07+02:00 CAYAARAHA
(England) 03 Maajo 2021. Kaddib qalalaaso xoog leh oo ay sameeyeen taageerayaasha ka gadoodsan qoyska iska leh Manchester United, waxaa guud ahaan la baajiyay ciyaartii ay Red Devils kula ciyaari lahayd Old Trafford naadiga Liverpool kulankii 34-aad ee horyaalka Premier League.
Ciyaarta ayaa ku jadwaleysneyd 6:30 maqribnimo xilliga Geeska Afrika, waxaana suuro gali waayay in la ciyaaro kaddib markii taageerayaasha Man United ay jabsadeen albaabada garoonka Old Trafford gudahana u galeen garoonka.
Haddaba waxaan eegeyna xilliga ay suuro gal tahay in ciyaartan dib loo ciyaaro iyo Manchester United oo heysata jadwal firaaqo la’aan ah maadaama ay ciyaarayaan marxaladihii ugu dambeeyay ee tartanka Europa League, waxaana firaaqada ugu dheer ee u dhexeyn kara labadeedii kulanba u dhexeyn kara wax aan ka badney afar maalmood.
Kooxda uu hoggaamiyo Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa la ciyaari doonta kooxda AS Roma kulanka lugta labaad ee wareegga nus-dhammaadka Europa League Khamiista soo aaddan oo ay taariikhdu tahay 6-da bisha May, waxaana u xiga Aston Villa oo ay 9-ka May la ciyaareyso, kaddib Leicester City ayay la ciyaareysaa 12-ka bishan, waxaana sii xigi doona kulanka Fulham ee 19-ka May, kaddib ayay la ciyaari doontaa naadiga Wolverhampton Wanderers.
Marka laga soo tago kulammadaas is xig-xiga, waxaa jirta suuro galnimo balaaran oo ay ku ciyaari doonaan fiinaalka Europa League marka la gaaro 26-ka bishan.
Marka la tix geliyo jadwalka mashquulka ah ee Man United, waxaa jira labo fursad oo kulankii baaqday lagu jadwaleyn karo, mid waa in caawa la ciyaaraa kulankii shalay baaqday, haddii aysan taas dhicinna waxaa la saadaalinayaa in lagu jadwaleeyo inta u dhexeysa 12-ka May illaa 19-ka May.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa la balansan naadiga West Bromwich Albion 16-ka May, waxaana ciyaartaas loo rogi karaa maalin kale si loo ciyaaro kulankii baaqday xalay.
Haddii ay taageerayaasha Man United ku adkeystaan inaan garoonkooda lagu ciyaarin oo uu qalalaasaha sii socdana, waxaa lagu soo warramayaa inay Reds hesho guusha iyo saddexda dhibcood ee kulanka.
« KOOX hubeysan oo maanta dil ka geysatay MUQDISHO
Dalalka Iran iyo Ciraaq oo iska kaashanaya dhanka Tamarta »